Ifektri Yomshini Wokubamba Okuzenzakalelayo - China Abakhiqizi Bomshini Wokubamba Okuzenzakalelayo, Abahlinzeki
Umshini we-Semi Auto Capping ngomshini
Umshini we-capping semi-othomathikhi ulungele ezemithi, ukudla, imfundo yesayensi neminye imikhakha. Lo mshini unezici zedivayisi yokuvikela ngokweqile kanye nendlela yokulungisa i-torque. Ukukhetha amawashi asezingeni eliphakeme asekhaya nakwamanye amazwe njengezinto zokushayela, kunezinzuzo zomsebenzi ophephile futhi onokwethenjelwa, impilo ende, ukugcinwa okulula, ukusebenza okulula nokusetshenziswa, ukusebenza kahle okuphezulu, ukusebenza okuphezulu, isakhiwo esilula, uhlelo lokusebenza olubanzi, futhi iwine ngokushesha ukwethenjwa kwamakhasimende.
Umshini Wokubamba Amabhodlela weSemi Auto Perfum
Umshini we-Semi Auto Vial Capping Machine webhodlela le-penicillin
Umshini we-vial bottle capping machine ngumshini we-desktop-knife cyclone capping machine onokubonakala kwensimbi engagqwali nokusebenza okuphephile futhi okulula. Lapho kusebenza, ibhodlela elivalekile alijikelezi, kanti imimese emithathu yesishingishane isatshalaliswa ngokufanayo ku-120 ° ukuzungezisa ikepisi nophawu. Isibambo senzelwe njengesiphethu. Isakhiwo, ibanga lemimese emithathu lingalungiswa kahle, ukuzivumelanisa nezimo kunamandla, futhi isivuno se-capping siphezulu. Lo mshini uyisinqumo esihle emasosheni, ezibhedlela, emalabhorethri nasezimbonini ezincane zemithi.